Ahoana ny fomba hijerena ny tranonkala amin'ny terminal Linux? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hijerena ny tranonkala amin'ny terminal Linux?
Ho an'ny rehetra Ireo liana amin'ny terminal any Linux na ho an'ireo izay nanontany "Azo atao ny mizaha ny tranonkala amin'ny terminal any Linux", Afaka miteny isika hoe eny, raha azo atao ary efa ela no natao izany.
Avy eo dia hanontany tena izy ireo, satria tsy zavatra isan'andro izy io, tsotra ny valiny, satria, rehefa nivoatra ny rafitra fiasa, nanamora ny zavatra maro ho an'ny mpampiasa, dia mitovy amin'ny mpitsidika sy ny rindranasa hafa izany.
Na dia ny ohatra voalohany aza amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao ny mampiasa ny terminal anao ho mpitety tranonkala noho ny antony tsotra mitaky "mpizaha tranonkala".
Ka ho hitantsika ny fametrahana sy ny fampiasana ny Lynx izay mpizaha lahatsoratra mifototra amin'ny lahatsoratra tanteraka ary miasa amin'ny rafitra miasa toa an'i Unix, ary koa amin'ny tsipika baikon'ny MS-Dos.
26 taona izy izao ary izao no tranonkala mpitety tranonkala tranainy indrindra izay mbola mivoatra mavitrika hatrany.
Na dia toa tsy misy ilana azy sy taloha aza i Lynx, dia azo ampiasaina izany, indrindra rehefa miasa amin'ny mpizara Linux lavitra ianao ary tsy manana fidirana GUI, ary mila mamita zavatra vitsivitsy ry zareo.
Ny mpizaha tranonkala Lynx dia tsy voalamina ao anaty fizarana Linux amin'ny fizarana Linux raha ny fantatra. Noho io antony io dia hametraka azy amin'ny fizarana Linux izahay.
1 Ampidiro ireo Lynx amin'ireo fizarana Linux samihafa
2 Fampiasana Lynx
Ampidiro ireo Lynx amin'ireo fizarana Linux samihafa
Satria i Lynx dia mpizaha malaza fanta-daza miaraka amin'ny fanohananany an-taonany maro, ny ankamaroan'ny fizarana Linux dia manana an'io fonosana io ao amin'ny toerana anaovany izany.
Mba hanatanterahana fametrahana marina ny Lynx ao amin'ny Debian, Ubuntu ary ny fizarana hafa azo avy amin'ireny, dia tsy maintsy manokatra terminal isika ary amin'izany dia hanao izao didy manaraka izao izahay:
Raha ny tranga Ireo mpampiasa ny Arch Linux, Manjaro, Antergos ary ny rafitra hafa azo avy amin'ity dia afaka mametraka miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Amin'ny tranga Fedora, RHEL, CentOS na rafitra hafa azo amin'ireo, ny baiko tsy maintsy ampiasain'izy ireo hametrahana Lynx dia:
Ary farany, ho an'ireo mpampiasa ny kinova openSUSE dia ho afaka hametraka an'ity browser ity izy ireo amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity:
Koa satria mifototra amin'ny tsipika fibaikoana ny lozisialy Lynx, dia misokatra ny pejin-tranonkala rehetra amin'ny famaritana mialoha ny URL. Ohatra, raha te-hitsidika ny google ianao dia mamaritra azy amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ny bokin-tranonkala Lynx dia mitantana ny hitsin-dàlana fitendry. Ka noho ny fampiasana azy ireo dia tsy maintsy manomboka mihazatra amin'izy ireo isika.
Andao hodinihintsika vetivety izy ireo, satria hanatsara kokoa ny traikefa fitetezana ao amin'ny terminal.
Voalohany aloha, Raha te handao ny tranonkala misy anao izy ireo ary te-hanana tranokala vaovao dia tsy maintsy manindry ny litera G amin'ny fitendry izy ireo.
O Raha te-hiverina pejy iray ianao, tsindrio fotsiny ny bokotra ankavia eo amin'ny fitendry. Raha hanaraka rohy iray dia tsindrio ny bokotra zana-tsipika ankavanana.
Ny fikororohana amin'ny tranokala Lynx dia mitovy amin'ny fampiharana maoderina marobe maivana eny an-tsena ankehitriny.
Raha hizaha pejy iray dia tsindrio ny bokotra Down eo amin'ny klavier ary kitiho ny Up raha hiakatra ny pejy.
Tranga hafahafa kokoa izao, dia ny fampahalalana izay aseho rehefa mitsidika tranokala iray ianao, izay mampahafantatra anao amin'ny ankapobeny ny momba ny fampiasana cookies sy ny hafa.
Mety hahagaga ny maro izany, fa ampy ny manindry fotsiny ny lakile A.
Ny browser Lynx dia ilaina nefa sarotra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izay tsy zatra amin'ny endrika Internet amin'ny Internet.
Soa ihany, ny programa dia manana boky torolalana amin'ny antsipiriany izay mamaritra ny lafiny rehetra amin'ny fitetezana.
Raha hijery ny boky torolàlana Lynx ao amin'ny terminal dia alefaso ity baiko manaraka ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fomba hijerena ny tranonkala amin'ny terminal Linux?
Na dia ilaina aza ny lynx dia aleoko ny rohy,
joelgsm dia hoy izy:
rohy2 sy elink. Na dia w3m aza
Mamaly an'i joelgsm
Victor alias: Machine101 dia hoy izy:
Ity renim-pianakaviana ity dia bitika tsara, apetrako amin'ny lynx ity fanehoan-kevitra ity
Valiny tamin'i Victor alias: Machine101
Fizarana GNU / Linux ho an'ny fiarahamonina siantifika
OpenXRay: motera sary nohatsaraina ho an'ny STALKER: Call of Pripyat